रङ्ग फेर्नमा सावित्रीको छेपारोलाई चुनौती , बम दिदीबहिनीमाथि अन्याय भयो भन्दै न्याय माग्न काठमाडौंमा - PUBLICAAWAJ
अपराध प्रदेश ७ समाचार
रङ्ग फेर्नमा सावित्रीको छेपारोलाई चुनौती , बम दिदीबहिनीमाथि अन्याय भयो भन्दै न्याय माग्न काठमाडौंमा
प्रकाशित : आइतबार, माघ ०६, २०७५१३:४८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
तस्वीर क्रमश : रोशनी ,सावित्री र बबिता
बम दिदीबहिनी र एसपी विष्टनै मुख्य अभियुक्त हो भन्ने सुवेदीले अहिले बम दिदीबहिनीलाई अन्याय भयो न्याय चाहियो भन्दै काठमाडौं ल्याईन् ।
पब्लिक आवाज/ संवाददाता
काठमाडौं| आफूलाई महिलाको हक अधिकारको लागि लड्ने नारीको रुपमा परिचय दिन चाहने सावित्री सुवेदीको निर्मला पन्त बलात्कार पछि हत्या प्रकरणमा अचम्मको भूमिका देखिएको छ । घटनाको करिब महिना दिन पछि सुवेदी बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय माग गर्दै माईतीघर मण्डलामा पेटिकोटमा अर्धनंग्न प्रदर्शन गरे संगै चर्चित आलोचित पनि बनिन् ।
लगत्तै उनि कञ्चनपुर पुगिन् र आन्दोलन चर्काउने बताईन् । निर्मला पन्तको परिवार भेट्न उनकै घर पुगिन र पन्त परिवार संग विवाद गरेर फर्किइन् । निर्मलाको बुबाले साबित्रीले घरमै आएर अपमान गरेको आरोप लगाए ।निर्मलाका आमाबुवालाई आफूहरु संग बजार प्रदर्शनमा जान भनिन श्रीमती बिरामी र आफूले खान पाकाउन लागेकोले जान नसक्ने बताए पछि सावित्रीले अपमान गरेको पब्लिक आवाज संग यज्ञराज पन्तल भने ।
निर्मला प्रकरणमा सुरुवात देखि समाचार सम्प्रेषण गर्दै आईरहेका पत्रकार जगदिश गिरीको वाइलाइनमा रहेको सिधान्युज डटकम प्रकाशित समाचार यस्तो छ ।
बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध विरुद्ध बोल्ने मान्छेले यसलाई गरिखाने भाँडो बनाउनु पक्कै राम्रो हैन् । गत साउन ११ गते साथीको घर गएकी निर्मला पन्तको भोली पल्ट बलात्कार पछि हत्या गरिएको अवस्थामा घर नजिकैको उखुबारीमा शव भेटिएको थियो । त्यस यता कञ्चनपुर संगै देशैभरी आन्दोलन हुदै आइरहेको छ । निर्मलाका वास्तविक हत्यारा सार्वजनीकको माग गर्दै जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर १४ वर्षीय शन्नि खुनाको मृत्यु भएको थियो भने घाईते अर्जुन भण्डारा अझै सम्म पनि अचेत अवस्थामै छन् । घटनाकोे २ महिना बढी समय भइसक्दा समेत अपराधी पहिचान हुन सकेका छैनन् । यसै बिच सावित्री सुवेदी पनि कञ्चनपुर आएकी हुन् ।”
निर्मलाका आमाबुवा जान नमाने पछि एक दुई दिन बजार क्षेत्रका प्रदर्शन गरेर साबित्री सुवेदी फिर्ता भइन् । प्रदर्शनका क्रममा लगायत अन्य अन्तरवातामा पनि निर्मला प्रकरण एसपी विष्ट र बम दिदीबहिनीको संलग्नता रहेकाले यीनीहरु लाई कारवाही हुनुपर्ने माग अगाडि सार्दै आइरहेकी सुवेदी एकाएक परिवर्तन भएकी छिन् । अहिले उनको अग्रस्र्तामा बम दिदीबहिनी आमा संगै काठमाडौं आएका छन् ।
बम दिदीबहिनी निर्दोष भएकाले उनिहरुले न्याय र क्षतिपूर्ती पाउँनु पर्ने माग राख्दै काठमाडौं ल्याएको स्रोतले पब्लिक आवाजलाई जनकारी दियो । यद्यपी साबित्री सुवेदीलाई बिभिन्न समयमा धेरै पटक फोन सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास असफल भयो । उनले पब्लिक आवाजले गरेको फोन काटिन् उठाइन्न् । सुरुमा सावित्रीको नजरमा भएका महाअपराधी बम दिदीबहिनी अहिले आएर कसरी निर्दोष भए ?
फेरी सम्मानित अदालतले दोषी करार नगरे सम्म कसैलाई पनि अपराधी भन्न नपाइने कानूनी मान्यता रहेको छ । केहि समय पहिला बम दिदीबहिनीको संलग्नता रेहेको भन्दै भाषण गर्ने सुवेदी अहिले आएर क्षतिपूर्ती र कारवाहिको माग गर्न उचालिरहेको परिपेक्षमा पहिलो कारवाहीको भागिदार उनि सोयम हुनुपर्छ की पर्दैन् ? अह्म प्रश्न उठेको छ । बम परिवारले एक-एक गर्दै मिडियामा नबोल्ने बताए ।
समय आए पछि सबै मिडिया एकै ठाँउमा राखेर बोल्ने बताए । साथै सावित्री सुबेदी बारे बमकी आमाले भनिन् “पहिला साबित्रीले थाहा पाएन छ हल्लाको पछि लागेर आरोप लगाएको र अहिले बम दिदीबहिनी निर्दोष रहेको थाहा पाए पनि हाम्रो पक्षमा लड्न आएको बताईन्” । यदि यस्तो हो भने आफूलाई महिलाको हकअधिकारको लागि लड्ने बताउने सावित्रीले राम्रो संग अध्यन नगरि नबुझेर उचालिन जानुले कति महिलाको हित होला यो प्रश्न कायम छ । सतहमा रहेर डलरबाजी गर्ने महिला अधिकारका नाममा जन्मेका धमिराहरुको कारण महिलाहरु थपअन्यायमा परेका छन् ।
बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चपुरकी १३ वर्षीय नाबालिका निर्मला पन्तको घटना सुल्झिनुको साट्टा झन पेचिलो बन्दै गएको छ । घटनामा प्रमाण संकलनमा प्रहरीले गरेको गल्ती र लापर्वाहीका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया झन जटिल बन्दै गएको अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरु बताउँछन् । पन्तको बलात्कार पछि हत्या काण्डमा आमा जनमानसले घटनामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नताको आशंका मुख्यतया तत्कालिन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्ली राज विष्ट र बम दिदीबहिनी माथि गरेका छन् ।
आशंका गरिनुका ठोस कारण नभए पनि शंका गर्न सकिने सुबिधा एक हैन् अनेक छन् । घट्ना स्थलको सुरक्षा देखि प्रमाण संकलन सम्म सबै नियतवस गरेको देखिन्छ । एसपी विष्टले लाश उठाउँन दिएको चेतावनीले झन शंका बढ्यो । प्रमूख जिल्ला अधिकारी संग समन्वय नै नगरेर गोली चलाउने आदेश दिनुले उनि माथि शंका गर्न थप बल पुगेको हो । नक्कली अभियुक्तका रुपमा हत्यारा भनि मानसीक सन्तुलन नभका स्थानिय ४१ वर्षीय दिलीप सिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरे पछि एसपीको घटनामा संलग्नता रहेको आमा जनमानसमा आशंका बढेको हो ।
बम दिदीबहिनी माथि आशंका गरिनुका कारण
निर्मला पन्त होमवर्क गर्न भनि आएको घर हो वम दिदीबहिनी ( बबिता बम र राशनी बमको) घर । रोशनी बम र निर्मला पन्त सहपाठी थिए । पन्त बम दिदीहिनीको घर बाट हराएकी हुन् । उनको शव भोलि पल्ट नजिकैको उखु बारीमा बलात्कार पछि हत्या गरेर घोप्टो पारिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । निर्मला अबरे सम्म घर नआए पछि सिमावर्ती बजार भारतको वनवासा गएकी आमा दुर्गा देवि पन्त खोज्न जादा उनि माथि बम दिदीबहिनीले दुव्र्यवहार गरेर फर्काए । पुन : पन्तकी आमा छिमेकी एक युवालाई लिएर जादा झन झोक्किए ।
निर्मला पन्त होमवर्क गर्न आएको बम दिदीबहिनी बस्ने घर
आमा समान दुर्गा पन्तलाई उनले तेरी छोरी पोईल गइन् होला हामीलाई के थाहा भन्दै हकारे । “तँ पहिला तेरी छोरी कस्ती थि त्यो हेर , तेरी छोरी पोईल गइन् होली हामीलाई थाहा छैन् “भन्दै बबिता बमले भनेको कुरा आमा पन्तले केहि समय पहिला पब्लिक आवाज संग गरेको कुराकानीमा भनेकी छिन् । साथी र बहिनीको साथी हराएको खबर सुन्दा खोज्न लाग्नुको सट्टा उल्टै दुव्र्यवहार गरे पछि बम दिदीबहिनीमाथि शंका गर्ने आधार सुरु भएको हो । अनुसन्धान संग सम्बन्ध राख्ने अधिकारीहरुका अनुसार बम दिदीबहिनीको घर शव फेला परेको स्थान पछि अनुसन्धान र शंकाको घेरामा आउँने बताउछन् । निर्मलाको शव फेला पर्नु पूर्व उनको साइकल फेला परेको थियो ।
निर्मलाको साइकल उखुबारी नजिकको खोलामा भेटिएको खबर सुन्ना साथ महेन्द्रनगर बजारको एक ब्युटीपार्लरमा बसेकी बबिता बमले ‘साईकल भेटिए छ शव पनि उतै भेटिएला’ भने पछि उनि थप शंकाको घेरामा परेकी हुन । त्यति बेला सम्म निर्मलाको अवस्था बारे सबै अज्ञात थिए । तर , बबितालाई कसरी थाहा भयो पन्तको हत्या भएको छ । र,शव पनि उखु बारी आसपास भटिने छ । बम परिवारले आगनमा भएको अम्बाको रुख पनि घट्नाको तेस्रो दिन काटे पछि उनिहरु माथीको शंका चरम उत्कर्षणमा पुगेको हो । अम्बा खान नचिनेका व्यक्तिको आवतजावत हुने भएकाले अम्बाको रुख काटेको केहि समय पहिला पब्लिक आवाज संग गरेको कुराकानीमा बम परिवारले बताएको थियो ।
तर , यस तर्कलाई विश्वास गर्न भने कठिन् हुन्छ । लामो समय देखि अम्बाको रुख रहेको थियो तर आफूले त्यो रुखको पात सम्म नछोएको एक छिमेकीले बताए । घट्ना भए पछि त्यस क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन पनि गरिएको थियो । सथै , उच्च सुरक्षा पनि । शव फेला परेको स्थल नजिकै भएकाले त्यस क्षेत्रका विशेष काम हुँदा पनि सर्वसाधारण जान हिच्किचाउथे भने अम्बा चोर्न जाने कुरै भएन । पहिलो चरणमा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख हाल बर्खास्त एसपी डिल्ली राज विष्टले अनुसन्धानका क्रममा स्थानिय हेमन्ती भट्ट र चक्रदेव बडुलाई चरम यताना दिएको र बम दिदीबहिनीलाई उच्च सम्मान साथ राखेको पिडित पक्षले बताए पछि एसपी र बम दिदीबहिनीको सम्बन्ध रहेको धेरैले आशंका गरेका थिए ।
( निप्षक्ष पत्रकारीताको अभ्यास गरिरहेको पब्लिक आवाज कसै पर्ती पनि पूर्वाग्रह राख्दैन् । अन्यायमा परेकाले न्याय पाउँनु पर्ने पक्षमा कलमा चलाउन तत्पर छ । तर , समाजमा भएका विकृति विरुद्ध कुनै पनि प्रभावमा नपरि खबरदारी सदैव गरिरहने छ ।) -सम्पादक
मोटर साइकल दुर्घटनामा दुईको मृत्यु !
कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न रु ७० लाख